डाक्टर को अगाडी अन्त्रवस्त्र खोल्नु पर्दा... - Purbeli News
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ ०१, २०७६ समय: २२:१२:३५
काठमाडौँ । दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी भइरहँदा २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा भोट हाल्ने हुटहुटी चल्न थालिसकेको थियो। कहिले घर जाउँला भन्ने बेचैनी छँदैथियो । अन्ततः म पनि भोट हाल्न गृहनगर दाङ्गको राप्ती गाउँपालिका पुगे । कार्यालयमा कामको चापका कारण लामो समय गाउँ बस्न नसक्ने भएकाले मतदान गरी भोली पल्टै मैले काठमाण्डौको यात्रा तय गरें । लालमटियाबाट करीब ३ किलोमिटर वर भालुवाङ्ग आइपुग्दा मेरो सिटसँगै अन्दाजी २०/२१ वर्षकी एक युवती आएर बसिन् ।
चिनजान नभएकाले सुरुमा बोलचाल गर्न र बस्नपनि अलि असहजजस्तो महसुस भयो दुबै जनालाई । तर, यात्रा गर्नु थियो काठमाण्डौंसम्म । त्यो पनि एउटै सिटमा बसेर । लामो यात्रा भएको हुँदा म चुपचाप बस्न सकिनँ । स्वभावैले म अलि बोलिरहने पर्ने मान्छे पनि हुँ । लागिरहेको थियो उनी पनि मसँग बोल्न खोज्दै थिइन्। ओठसम्म आवाज आएरपनि अड्किएको जस्तो लाग्दै थियो । तर, चन्द्रौटा आइपुग्दा सम्म शुन्यता भंग भैसकेको थियो । हामी बोल्न थाल्यौं । लामो यात्रामा सँगै बसेको मान्छेसँग साथीझैं गफिन पाउँदाको मज्जा मैले लेखिरहनु पर्दैन ।
काठमाण्डौंको बानेश्वरमा बस्ने उनी हाल नेपाल कमर्श क्याम्पसमा बीबीए अध्ययनरत रहिछन् । घर भने प्युठानको बाग्दुला रहेछ । केही समयअघि बसाइ सरेर राप्ती गाउँपालिका अर्थात हाम्रै गाउँमा आएका रहेछन् उनका परिवार । हामी त अब छिमेकी भएछौ नी नाम के हो भनेर मैले सोधेँ । उनले मुस्कुराउदै जवाफ दिइन् ‘छिमेकीको नाम अब आफै पत्ता लगाउनुस् म त नभन्ने ।’ यतीभन्दा म केही समय बोल्नै सकिन चुप लागेर बस्न बाध्य भए ।
मलाई अल्लारे केटा भनेर नाम भनिनन् कि ? वा फेसबूकमा रिक्वेस्ट पठाउँछ भनेर पो होकी ? नाम नभनेको, यति सोच्दै गर्दा उनले आफ्नो नाम सुनिता गाहा मगर (नाम परिर्वतन)भएको बताइन् । छिमेकीको नाता जोडिसकेको हुँदा अब हामीलाई एकअर्काबीच गफगाफ गर्न कुनै असहजता बाँकी थिएन । गफ यसरी जम्न थाल्यो कि समय बितेको पत्तै भएन क्षणभरमा बुटवल पुगेछौं । अक्सर यति चाँडो बुटवल पुगेकोजस्तो अनुभव यसअघि मलाई भएको थिएन । उनले पनि मेरो बारेमा कुरा खोतन्न थालिन् । मैले आफ्ना बताउन मिल्ने जति सबै कुरा बताएँ । लामो समयदेखि स्वास्थ्य पत्रकारीता गर्दै आएको कुरा छुटाउने कुरै भएन । यती भनिरहँदा उनी एक्कासी केही भावुक देखिइन् ।
त्यसपछि उनले सुनाउँदै गइन् । म एकटकले उनको आवाजमा केन्द्रित भएँ । सामान्य औषधि पसलबाट ल्याएको औषधिले बिस्तारै योनीमा भएको घाँउ निको हुँदै थियो । तर, समस्या थपियो । चञ्चल युवावस्था । मन कहाँ शान्तसँग बस्छ र ! गर्मीको समय थियो । नजिकै रहेको तालमा पौडी खेल्न जाने निर्णय गर्यौं । तर, तालमा पानी सफा भने थिएन । सायद तालको पानी सफा नभएर पनि होला त्यसपछि मेरो यौनीमा ससाना खटिरा आउन थाल्यो । उक्त खटिरा विस्तारै चिलाउन पनि सुरु भयो ।
यो कुरा साथीहरुलाई मात्र थाहा थियो । परिवारलाई भन्न सकेको थिइँन । तर, अन्तत म हिड्नै समेत नसक्ने अवस्थामा पुगें । मेरो अवस्था देखेपछि साथीहरुले घरमा भनिदिएछन् । आमाले पनि कोही केटासँग यसको सम्बन्ध त छैन भनेर सोध्नुभएछ । यति उनले सुनाउँदै गर्दा मैले उनको कुरो काटेर सोधिहालें ‘की फोहर पानी बहाना मात्र हो ?’ ‘कति हतार गर्नुभएको मेरो कुरा पुरा त सुन्नुस्, पत्रकार न पर्नु भयो’ उनले रिसाउँदै भनिन् । मैले टाउको मात्र हल्लाएर समर्थन जनाएँ । उनले थप्न थालिन्–कसैसँग पनि सम्बन्ध नभएको विश्वास दिलाएपछि आमाले उपचारका लागि बुटवल जाने भन्नुभयो । त्यसपछि म सारै डराएँ । ‘कसैसँग पनि सम्बन्ध नभएको भए किन डराएको त ?’ मैले फेरी प्रश्न गरें ।
तर, यसले मलाई धेरै ठूलो पाठ सिकाएको छ । मेरो सानो गल्तीले ठूलो पीडा खेप्नुपर्यो । अहिले हरेकदिन योनाङ्गको सफा गर्नुको साथै पेन्टी पनि चेन्ज गर्ने गरेको छु । यो कुरा धेरै साथीहरुलाई सुनाउने गरेको छु ताकी उनीहरुले पनि यस्तो पिडा खेप्न नपरोस् । , उनले सुझाव सहित आफ्नो अनुभव सुनाइन् । ‘साथीहरुलाई सुनाउनु राम्रो तर, मलाई किन सुनाएको’ मैले प्रश्न गरें । ‘डाक्टरहरुसँग लजाउनु भनेको यौन तथा प्रजननसँग सम्बन्धित रोगहरुलाई बचाइराख्नु हो । त्यसैले तपाईले आफ्नो सञ्चारमाध्यमबाट जनचेतना जगाउनुस् भनेर सुनाएको हुँ’ उनले हाँस्दै भनिन् । उनले हल्का ढंगबाट भनेजस्तो लागेपनि साँच्चै यो सत्य थियो । मैले मनन् गरें । यस्तैयस्तै कुरा गर्दै हामीले काठमाण्डौसम्मको यात्रा तय गर्यौं । कलंकीबाट झरेसँगै हामी आआफ्नो बाटो लाग्यौं ।
सुनिता त एउटी उदाहरण मात्र हुन् । यस्तो घटना हरेकदिन भइरहेको हुन्छ । पुरुष डाक्टरलाई जचाउँन वा आफ्नो समस्या भन्न डराउँदा ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरु अझै आफ्नो रोग लुकाउन बाध्य छन् । उपचारमा संलग्न डाक्टरले पनि समय समयमा जाँच्ने नाममा महिलाका संवेदनशिल अंगहरुमा चलाउने, यौन दुव्र्यवहार गर्ने घटनाहरु सुनिनुले पनि महिलाहरु पुरुष चिकित्सकसँग सहजै प्रस्तुत नहुने समस्या अझै विद्यमान छ । यी दुवै चीज अन्त्य नुहँदासम्म थुप्रै सुनिताहरुले आफ्ना घाउहरु लुकाइ नै राख्छन् । – हाम्रो डाक्टरबाट साभार